ဝေးနေတာကြာခဲ့ပီ – Hlataw.com
လွန်ခဲ့သော ၃လခန့်က ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးသန့်စင် ရွာသို့ ပြန်ပြီး ကထိန်ခင်းရာ လိုက်ပါ သွားခဲ့ရ ၏။ သားဖြစ်သူ ဇင်အောင်နှင့် သမီးဖြစ်သူ သော်တာထွန်း တို့မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် မဆုံသဖြင့် အိမ်မှာပဲ နေခဲ့ ကြသည်။ ဦးသန့်ဇင်တို့ လင်မယားမှာ တာက်တိုမယ်ရ ခိုင်းသော ဖိုးလုံးအား ခေါ်ကာ ကထိန်ခင်း သွားခဲ့ကြ၏။ဖိုးလုံးပင် ဖိုးလုံးမှာ အသားမဲမဲ အရပ်ပုကာ ကိုယ်လုံး ခပ်ပြတ်ပြတ် နှင့် အသက် ၂၁ နှစ်ထဲ ရောက်ရှိနေ၏။ ဖိုးလုံးမှာလည်း ရွာသို့ ခဏ ပြန်လိုက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် တလမ်းလုံး ပျော်ရွှင် နေသည်။ ရွာရောက်သည့်နေ့ ဦးသန့်ဇင်မှာ ငယ် သူငယ်ချင်းများနှင့် သောက်ရင်း စားရင်း ညပိုင်း ထမင်းပင် မစားနိုင်ပဲ အိပ် ပျော် သွားတော့၏။ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ဦးသန့်ဇင်တို့ တည်း သည့်အိမ်အား ဖိုးလုံးအား ခေါ်ပြီး ညအိပ်လိုက်ရ သည်။ ဖိုးလုံးတယောက်လည်း သူ့အိမ် မအိပ်တော့ပဲ ဦးသန့်ဇင် တို့ လင်မယား တည်းသော အိမ်သို့ လိုက်အိပ် ရ၏။ ဦးသန့်ဇင်တို့ အိပ်သော အိပ်ခန်း၏ ခပ်လှမ်း လှမ်းတွင် ခြင်ထောင်လေး ထောင်ကာ အိပ်နေရင်း ည၁၀နာရီ ကျော်ကျော်တွင် ဦးသန့်ဇင် ထအမ်ရာ ဒေါ်သီတာမိုးနှင့် အတူ ဦးသန့်ဇင်အား နှိပ်နယ် ပြုစုရင်း ပြန်အိပ်လိုက် သည်။ နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေရင်း ညလယ်တွင် ဆီးပုံး တင်း လာကာ သေးပေါက်ချင်သဖြင့် အိမ်၏ နောက်ဖေး တံခါး အား ဖွင့်ကာ အိမ်သာ သွားရန် ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်း အိမ်သာနား အရောက် ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ထမိန်အောက်နားစအား မကာ တရွှီးရွှီးနှင့် သေးထိုင် ပေါက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရ၏။
လရောင် အောက် ဒေါ်သီတာမိုး ပေါင်ဂွမှ အမွှေးအုံကြီးက အတိုင်း သား မြင်နေရသည်။ဖိုးလုံး ရုတ်တရက် ကြောင်ကြည့်ရင်း ဘေးသို့ လှည့်ကာ မတ်တပ် ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် သေးကော့ ပန်းနေမိ၏။ ဒေါ်သီတာမိုးမှာလည်း အိမ်မှ ခိုင်းတဲ့သူမို့ အလေး မထား တာလား သားအမိ အရွယ်မို့ ဂရု မစိုက်တာ လား မသိ မတ်တပ်ရပ် သေးပေါက်နေသော ဖိုးလုံး အား ကြည့်ကာ သေး ဆက်ပေါက်နေတော့သည်။ နောက်မှ ရောက်သော ဖိုးလုံးမှ အရင်ပြီးကာ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင် သွား၏။ခြင်ထောင်ထဲ ဖိုးလုံး တယောက် အိပ် မပျော်တော့ပေ။ အရင်က မိခင် အရွယ်မို့ ဘာစိတ်မှ မရှိ သော်လည်း ဒေါ်သီတာမိုး စောက်ပတ်အုံအား မြင်မိကာ စိတ်လှုပ်ရှား နေရ၏။ လိုးချင်စိတ် များ တဖွားဖွား ပေါ်လာသဖြင့် ဂွင်းထုပြီး အိပ်လိုက်ရသည်။ မနက် အိပ်ယာနိုးသည်အထိ ဒေါ်သီတာမိုး စောက်ဖုတ် အုံကြီး မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင် နေမိ၏။ ကထိန်ခင်းပြီး မြို့သို့ ပြန်အရောက် ၅ရက်ခန့် အကြာ ဒေါ်သီတာမိုးတယောက် အိမ်၏ တောင်ဘက် ကား ဂိုဒေါင် ဘေး ဦးစံမောင်နှင့် ဖိုးလုံး နေသော အခန်း လေးဆီ လျှောက် လာခဲ့၏။ အခန်းတံခါး ဟနေသဖြင့် အသာတွန်း ဖွင့်ကာ ဝင်လာခဲ့သည်။ ” ဖိုးလုံး …… ဦးစံမောင် …… ရှိလား ” ဖိုးလုံး ရုတ်တရက် လန့်သွားမိသည်။ ကုတင်ပေါ် ခေါင်းရင်းဘက် ဖုန်းအားထောင်ကာ အပြာကား ဖွင့်ကြည့် ရင်း ဖုန်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တင်ပလင်ခွေ ထိုင်ပြီး ဂွင်း ထု နေစဉ် နောက်ကျောဘက်မှ ပေါ်လာ သော အသံကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ဆက်ကနဲ့ တုန်သွား ရ၏။ ” ဟုတ် …… ဟုတ် …… ရှိပါတယ် …… လမ်း ထိပ် ဆေးလိပ် …. သွား သွား ….. သွား ဝယ် နေ တာ ” ဖိုးလုံး စကားသံ တုန်ရင်နေသည်။ ” ဟဲ့ …. အို …… နင် နင် ….. ဖုန်း ဖွင့် ပြီး …… မကောင်းတဲ့ ကားတွေ… ကြည့် ….. ကြည့် ……. ဟင် ” ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ကုတင်နား ဖိုးလုံး ဘေး အရောက် ဖုန်းထဲမှ တအားအား အော်သံများကြောင့် အမှတ်တမဲ့ ကြည့်မိရာ အပြာကား ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ဖိုးလုံးဘက် လှည့်ပြောလိုက်၏။
ဖိုးလုံးဘက် အလှည့် တင်ပလင်ခွေထိုင်ကာ ပေါင်ကြားမှ လီးအား မြင်လိုက် ရပြန်သည်။ ဖိုးလုံး လက်သီးစုပ်ထဲမှ လီးမှာ ဒစ်ကြီး ကားထွက် နေကာ ဒစ်အောက် လီးအရည်ပြားပေါ် အကြောများ ထနေသည်ကို ထပ်မန် တွေ့နေမိ၏။ ” ကျနော် ….. ဟို ……ဟို …..” ဖိုးလုံးမှာ ဘေးနား ရပ်နေသော ဒေါ်သီတာမိုးအား ပြန်ဖြေရင်း လက်ထဲမှ လီးအား စိုက်ကြည့် နေမှန်း သိသဖြင့် လီးအား လွတ်ကာ ပုဆိုးဖြင့် အမြန် ဖုံးလိုက် ရတော့သည်။ လက်မှ လွတ်လိုက်သော ပုဆိုးအတွင်း မှ လီးမှာ တဆက်ဆက် တုန်ခါနေရှာ၏။ ဒေါ်သီတာမိုး မှာ လည်း ဘာဆက် ပြောရမှန်း မသိ ဆွံ့အနေမိ သည်။ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ် ဖိုးလုံး ပုဆိုးထဲမှ ဆက်ကနဲ့ ဆက်ကနဲ့ တုန်နေသော လီးအား ကြောင် ကြည့် နေမိသည်။ ရှက်စိတ်နှင့် အတူ ပေါင်ကြားထဲ အဖုတ်ဆီမှ ဆစ်ကနဲ့ ခံစားလိုက်ရရှာ၏။ အပြင် မထွက်ပဲ အိမ်ထဲ အနေများသူမို့ အင်္ကျီလက်ပြတ် လေးနှင့် ဒူးဖုံးစကပ် အပါးလေးသာ ဝတ်ထားမိသည်။ ဖိုးလုံးတယောက် ဒေါ်သီတာမိုးအား ကြည့်ရင်း ရှက်စိတ် ထိတ်လန့်စိတ်များမှ တဆင့် ရမ္မက်စ်ိတ်များ ဝင်ရောက် လာတော့၏။ ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ဒေါ်သီတာမိုးအား သိုင်းဖက်ရင်း ပါးပြင်၂ဖက်အား ဖိနမ်းပစ်သည်။ ” ဟဲ့ …..အို့ ……. ဖိုးလုံး ….. လွတ် လွတ် …… လွတ်စမ်း ……နင် နင် …..ဒါ ဘာ လုပ် … လုပ် … အု …… ဖလု …. ပြွတ် ပလပ် ……. အွန့် …… ပြွတ် ပြွတ် ” ဒေါ်သီတာမိုး ရုန်းကန်ရင်း ပြောနေစဉ် နူတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ် ခံရသဖြင့် အသံ ထပ်မထွက်တော့ပေ။ ဖိုးလုံးမှာ လူကောင် သေးသော်လည်း အလုပ်ကြမ်း လုပ်ကိုင် နေသူမို့ သန်မာနေ၏။ ဖိုးလုံး လက်၂ဖက် ထဲမှ ရုန်းကန် နေစဉ် ပေါင်ဂွလေးထဲ စကပ်အပါးလေး ပေါ်မှ မာထင်နေ သော အရာ တခုက ဖိထောက်မိ သဖြင့် တကိုယ်လုံး တုန်ခါ သွားရပြန်သည်။ အထိ အတွေ့နဲ့ ဝေးနေသဖြင့် ကာမစိတ်လေး ဝုန်းကနဲ့ တောင်လောင် လာမိ၏။
သို့သော် သူမ အိမ်မှ တောက်တို မယ်ရ ခိုင်းသော လူ တယောက်မို့ မာနက ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။ ရုတ်တရက် ဖိုးလုံး လက်တဖက် ပြေလျော့ သွားပြီး သူမ ပေါင်ကြားထဲမှ အဖုတ်အား ပွတ်ပေးရာ ရုန်းကန်နေရင်း အားလျော့လာမိသည်။ ဖိုးလုံးမှာ ရာဂနတ် ဖမ်းစား ထားသဖြင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ရှေ့ဆက်တိုးနေတော့၏။ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ တဖြည်းဖြည်း ဖိုးလုံး လျှာဖျားလေးအား ဆွဲစုပ်ရင်း မသိမသာလေး တုံ့ပြန် ပေးလာသည်။ ကာမစိတ် တဝက် မာနစိတ် တဝက်ဖြင့် ဒေါ်သီတာမိုး အရသာ ၂မျိုး ပူးတွဲ ခံစားနေမိရှာသည်။ ပေါင်းကြားမှ အဖုတ်မှာလည်း ယားလာကာ အရည်များ စိမ့်ထွက် နေ၏။ ထိုစဉ် ဖိုးလုံးတယောက် နူတ်ခမ်းချင်း စုပ် အဖုတ်ပွတ် နေရာမှ ရုတ်တရက် ဒူးထောက် ထိုင်ချ လိုက် သည်။စကပ် အောက်နားစ လေးအား ဆီးခုံးထိ ပင့်တင်ကာ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေး တုတ်တုတ် ၂လုံးကြား ညှပ်နေ သော အဖုတ်အုံကြီးအား စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ ရွာသို့ ဦးသန့်ဇင် ကထိန်ခင်း သွားစဉ် အိမ်သာထဲ မြင်လိုက်ရ သော စောက်မွှေးအုံ ထူထူကြီးအား အနီးကပ် မြင်နေ ရ၏။ လက်တဖက် ဖြင့် ဖြဲကြည့်ရာ အမွှေးမဲမဲ များအောက် နူတ်ခမ်း ၂ဖက် အနည်းငယ် လန်နေကာ ဘေးသား၂ခြမ်း မှာ ဖေါင်းကြွနေသည်ကို တွေ့လိုက် မိသည်။ ” လှလိုက်တာ … အန်တီမိုးရယ် … စောက်ဖုတ်က …… အကြီးကြီးပဲ ” ဖိုးလုံးဆီမှ အက်ကွဲသော စကားသံ ထွက်ပေါ်လာပြီး စောက်ပတ်အုံကြီးအား တရွှတ်ရွှတ် နမ်းနေရှာ၏။ဒေါ်သီတာမိုး ဖင်သားများ ကြုံ့သွားကာ ပေါင်ကြား ထဲမှ အဖုတ်အား နမ်းနေသော ဖိုးလုံးခေါင်းအား တွန်းထုတ် လိုက်တော့သည်။ ” ဟာ …… အန်တီမိုး …… ကျနော် ……… ” ” ဦးလေးစံ ပြန်လာရင် … မကောင်းဘူး ” ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ဖိုးလုံး ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပယ်အား နားလည်သဖြင့် ဖိုးလုံး စကား မဆုံးခင် ဖြတ်ပြောကာ အခန်းလေးထဲမှ ထွက်ခွာ သွား၏။ ဖိုးလုံးလည်း ဖင်ကြီး တရမ်းရမ်း ဖြင့် ထွက်သွားသော ဒေါ်သီတာမိုး နောက်မှာ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ဖြင့် ခပ်ခွာခွာ လိုက်လာ ခဲ့သည်။ အိမ်နောက်ဖေး ပေါက်မှ ဝင်ကာ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် ဒေါ်သီတာမိုးတယောက် ကုတင်ပေါ် တင်ပလွဲထိုင်ပြီး ခေါင်းငုံထားလိုက်ပြန်သည်။
ရှက်စိတ်နှင့် ရဲနေသော မျက်နှာလေးအား ဖိုးလုံးမှ ဆွဲမော့ကာ နူတ်ခမ်းချင်း တေ့ စုပ်ပစ်၏။ တဆက်ထဲ အင်္ကျီလက်ပြတ်လေး ပေါ်မှ နို့အုံ၂ဖက်အား ညှစ်ချေ ပေးရာ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ဖိုးလုံး ခေါင်းအား လက်တ ဖက်ဖြစ် ဖမ်းကိုင်ကာ လျှာထိပ်လေး အား ဖိစုပ်ပေး လိုက်သည်။ ဖိုးလုံး စိတ်ရဲ လာကာ နို့အုံအား ညှစ်ပေးနေရင်း အောက် သို့ ရွေ့ကာ ပေါင်တန် ၂ဖက်အား ပွတ်သပ် ပေးရာ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ပေါင်၂ဘက် မသိမသာ ကားပေး နေ၏။ ပေါင်ဖြဲပေးသည်နှင့် ဖိုးလုံးလက်မှာ စကပ် အောက်နားစ ထဲ လက်လျိုသွင်းကာ ပေါင်ကြား ထဲ စမ်းကြည့် လိုက်ပြန် သည်။ အရည်ရွှဲ နေသော အဖုတ်အား စမ်းမိသည်နှင့် လက်ခလယ် ဖြင့် အက်ကွဲကြောင်း အတိုင်း အထက် အောက် ဖိဆွဲပေးကာ ဒေါ်သီတာမိုး ကိုယ်လုံးအား ကုတင်ပေါ် လှဲချပစ်၏။ ဒေါ်သီတာမိုး ကိုယ်လုံးမှာ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်အနေထား လှဲနေသော်လည်း ခြေသလုံး တုတ်တုတ် ခဲခဲလေးမှာ ကုတင်စောင်းမှ အောက်သို့ တွဲလောင်း ကျနေရသည်။ပါးပြင်၂ဖက် နမ်းရင်း အင်္ကျီအပေါ်မှ နို့နှစ်လုံး အား ညှစ်ချေပေးလိုက် ၏။ အင်္ကျီလက်ပြတ်လေးအား ချွတ်ရာ အနက်ရောင် ဇာဘော်လီအောက် ရုန်းထွက်နေသော နို့အုံ အပေါ် ခြမ်း အား မြင်နေရသည်။ ဇာဘော်လီချိတ်အား ကိုယ်တစောင်း လှည့်ဖြုတ်ရာ ပက်လက် ပြန်လှန် သည်နှင့် အနည်းငယ် အိတွဲနေသော နို့အုံထိပ် နို့သီးခေါင်း နီညိုလေးမှာ မာခဲနေ ၏။ နို့သီးခေါင်း လေးအား လျှာထိပ်လေးဖြင့် ဝိုက်ကာ ဖိစို့ ပေးစဉ် ဒေါ်သီတာမိုး ခန္ဓာကိုယ်မှာ တအီးအီး ညည်းရင်း လူးလွန့်လာတော့သည်။ တအင်းအင်းနှင့် နွယ်နွယ် လွန့်လူးလို့နေသည်။ ခပ်မို့မို့ ဗိုက်သားလေးအား လျှာ အပြားလိုက် ယက်ရင်း စကပ် မျှော့ကြိုးလေးအား ပေါင်ရင်း ဘက် ဆွဲချစဉ် ဖင်သားစိုင်ကြီး ကြွပေး နေပြန် ၏။ ဆီးခုံးနား လျှာပြားလေး အရောက် ညှီစို့စို့ နှင့် စောက် ရည်နံ့လေး ဖိုးလုံး နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင် လာတော့ သည်။
ဖိုးလုံး မတ်တပ် ထရပ်ကာ ဒေါ်သီတာမိုး၏ ကုတင်စောင်း တွဲလောင်းကျနေသော ခြေသလုံး ၂ဖက်အား ကုတင်ပေါ် ပွေ့တင်ပစ်၏။ ပေါင်ရင်း လိပ်နေသော စကပ် မျှော့ကြိုး လေးအား ဆွဲချွတ်ကာ ကုတင်ကြမ်းပြင် အောက် ပစ်ချ လိုက်ပြန်သည်။ ပေါက်တန် ဖွေးဖွေး တုတ်တုတ် ၂ဖက် ကြား ဒူးထောက်နေရာယူကာ စောက်ပတ်ပေါ် မျက်နှာ အပ်ချ ပစ်၏။ စောင်မွှေးအုံအား ပါးပြင် ၂ဖက်ဖြင့် ဘယ်ညာ ပွတ်ကာ ခဏ စိုက်ကြည့် နေသည်။ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ လင်ဖြစ်သူနှင့် အကြိမ်ကြိမ် လိုးခဲ့ သော ကုတင်ပေါ်တွင် ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ဖင်ကြီးကြွ ကာ ခေါင်း ထောင်ကြည့်နေသော ဖိုးလုံး ဆံပင်အား ဆွဲပြီး စောက် ဖုတ်နှင့် ကပ်ပေးလိုက်တော့၏။ ဖိုးလုံး ၏ လျှာစွမ်းအား သိချင်စိတ် ပြင်းပြကာ ပါးစပ်နေရာ လေးအား စောက်ပတ် ဖြင့် လှမ်းပွတ် ပေးနေသည်။ ဖိုးလုံးမှာလည်း ရွာမှာ တခါ မြင်ပြီး အိပ်မက်ထဲထိ စွဲလမ်းနေသော ဒေါ်သီတာမိုး အဖုတ်အား လျှာ အပြားလိုက် ပင့်ကာ တပြတ်ပြတ်နှင့် ယက်ပေးလိုက် သည်။ စောင်မွှေးအုံအား တံတွေးနှင့် အရည်ကြည်များ ကပ်ကာ အဖုတ် နူတ်ခမ်းသား ၂ဖက် ဖေါင်းကား လာသည်နှင့် အက်ကွဲ ကြောင်းထဲ လျှာထိပ် ဖြင့် အထက်အောက် ဖိဆွဲပေးပြန်၏။ တဖြည်းဖြည်း အက်ကွဲ ကြောင်းထိပ်ရှိ စောက်စိ လေးမှာ ခေါင်းထောင်လာ ပြန် သည်။ အစိထိပ်လေး အား လျှာဖျား လေးတင်ကာ ဖိချေရင်း ပါးစပ်ထဲ ဆွဲစုပ်ပစ်ရာ ဒေါ်သီတာမိုး ဖင်ကြီး လေထဲ မြှောက် တက် လာ၏။
အ …..အ ……ရှီးးးးး ……. ကောင်းလိုက်တာ …… ဖိုးလုံးရယ် …….အင်း ……ဟုတ်တယ် …..အစိလေး ……စုပ်ထား ….. အ ……..အားးးး …….. ကျွတ်ကျွတ် ” ၁၀မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ဒေါ်သီတာမိုး ဖင်ကြီး ကော့တက် လာကာ စောက်ရည်များ ထောင်ပန်း ပစ်တော့သည်။ ဖိုးလုံး တယောက် စောက်ခေါင်း ပေါက်အား ပါးစပ်ဖြင့် တေ့ကာ ပန်းထွက်နေသော စောက်ရည်များအား တဂွတ် ဂွတ်ဖြင့် မျိုချ နေ၏။ အထိအတွေ့ ဝေးနေသော ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် ပထမ အချီမှာပင် စောက်ရည် များ အားရပါးရ ပန်းထုတ်ရင်း ကုန်စင်မှ ဘုတ်ကနဲ့ ဖင်ကြီး မွှေ့ယာ ပေါ် ပြန်ကျလာသည်။ ” ကောင်းလား ……… အန်တီမိုး ” ” ကောင်းတာပေါ့ …… ဖိုးလုံးရယ် …… ငါ ဒီလို …… မခံစား ရတာ ………… ကြာပီလေဟာ ” မေးပြီး ဖိုးလုံးမှာ ထရပ်ရင်း အပေါ်အင်္ကျီအား ချွတ် နေစဉ် ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ထရပ်ရင်း မျက်နှာချင်း ဆိုင် အနေထားနှင့် ဖိုးလုံး နူတ်ခမ်းဒေါင့်မှာ သူမ စောက် ရည်များအား ယက်ကာ မျိုချနေ၏။ ဖိုးလုံး အင်္ကျီချွတ် ပြီးသည်နှင့် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ပုဆိုး ခါးပုံ စအား သူမလက်နှင့် ဆွဲဖြည်ရင်း ပေါင်ကြားမှ ထောင် နေသော လီးအား ကြည့်ကာ မျက်လုံးလေး ပြူးနေ ရှာသည်။ ” ကြီးလိုက်တာ …… ဖိုးလုံးရယ် …… နင် နင် .. ဆေးတွေ ဘာတွေများ ….. ထိုးထား သေးလား … ဟင် ” ” မထိုးပါဘူး …… အန်တီမိုးရယ် ” ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် လောလော လတ်လတ် ပြီးထား သော်လည်း ကာမစိတ် မကျသေးပဲ ဖိုးလုံး လီးထိပ်အား တရွှတ်ရွှတ် နမ်းနေပြန်သည်။ ညာလက် ဖြင့် လီးတဝက် လောက်မှ ဆုပ်ကိုင်ရင်း ဒစ်အားဖြဲကာ လီးတန်အား အောက်နိမ့်ရင်း ဒစ်အပေါ်ကြားထဲ လျှာ ထိပ်လေးဖြင့် ဖိယက် ပေးလိုက်၏။ ” အ ….. ရှီးးးးးးးးးးး ” ဖိုးလုံး ကိုယ်လုံး ဆက်ကနဲ့ တုန်ကာ အကနဲ့ ညည်း လိုက်ရသည်။ ဒစ်အပေါ်ခြမ်း ယက်ပြီး လီးအား ထောင် ကိုင်ပြီး ဒစ်ဖူးအောက် မေးသိုင်းကြိုးလေး နှင့် ဘေးပတ် ပတ်လည်အား လျှာဖြားဖြင့် ဝိုက်ယက်ကာ လီးထိပ်အား ဆွဲစုပ်ပစ်၏။ လီးထိပ်အား ငုံရင်း လီးတန် ကိုင်ထားသော လက်အား လွတ်ကာ လဥ ၂လုံးအား ညှစ်ချေပေးပြန် သည်။
ဖိုးလုံး တယောက် ဖင်သားများ ကြုံ့ကာ အံကြိတ် ခံနေရတော့၏။ ” အ ……..အားးးးးးး …….အ ….. ကျွတ် ………..အ အ ” ဖိုးလုံး အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည် ရောက်နေရှာသည်။ ဒီလို အခြေနေမျိုး အိပ်မက်ပင် မမက်ဖူးပေ။ ထမင်း ရှင် ဟင်းရှင် ကျေးဇူးရှင် ဒေါ်သီတာမိုးမှ သူ၏ လီး အား စုပ် ပေးလိမ့်မည်ဟု ယောင်လို့တောင် မတွေးရဲ။ ခေါင်းလေး ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်နှင့် စုပ်ပေးနေသော ဒေါ်သီတာမိုး ပါးစပ်အား လီးတဝက်ခန့် အထုတ်သွင်း လုပ်ကာ လိုးနေမိ၏။ လီးဝင်သွားတိုင်း လီးထိပ် အပေါက်လေးအား လျှာထိပ်လေးနှင့် ထိုးရင်း လီးပြန် အထွက် လီးအရည်ပြား အား ခပ်တင်းတင်း ဆွဲစုပ် နေသည်။ တဖြည်းဖြည်း လီးတန် တလျှောက် ကျဉ် လာပြီး လရည်ထွက်ချင် လာ၏။ ထိန်းထားရင်း မခံ နိုင်တော့သဖြင့် ဒေါ်သီတာမိုး ပါးစပ်မှ လီးအား ဆွဲ ထုတ် လိုက်တော့သည်။ ” အ …….အားးးးး …… ထွက် …… ထွက်……. ထွက်တော့မယ် …….. ရှီးးးးးး ……. မ ရ တော့ ……… တော့ …… အ ……..အားးးး …….အားးးးးး….. ထွက် ကုန် ပြီ … ရှီးးးးး …. ရှီးးးးးး ” ပါးစပ်ထဲမှ လီးအား ဆွဲထုတ်ရာ ထိန်းထားသော လရည် များ တဗျစ်ဗျစ်နှင် ဒေါ်သီတာမိုး မျက်နှာ တဝိုက် ပန်းမိ ကုန်၏။ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ မရှောင်ပဲ လရည် ကုန်သည်နှင့် ဆက်ကနဲ့ ဆက်ကနဲ့ တုန် နေသော ဖိုးလုံး ဒစ်အား ဆွဲစုပ် ပေးပြန်သည်။ လီးထိပ် အပေါက်ထဲ ဥနေသော လရည် စက်လေး အား ပြွတ်ကနဲ့ စုပ်ပြီးမှ ပါးစပ်ထဲက ထုတ် ပေး လိုက်တော့၏…..ပြီး။